Vaovao - Fiovana kely dimy hanamafisana ny fahombiazan'ny zavamaniry
Fiovana kely dimy hanamafisana ny fahombiazan'ny zavamaniry
Ny vidin'ny angovo amin'ny fampandehanana motera elektrika mandritra ny folo taona dia farafahakeliny 30 heny amin'ny vidin'ny fividianana voalohany. Miaraka amin'ny fanjifana angovo tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny vidim-piainana manontolo, Marek Lukaszczyk mpamokatra motera sy mpamily, WEG, dia manazava fomba dimy hanatsarana ny fahombiazan'ny angovo maotera. Soa ihany fa ny fiovana eo amin'ny zavamaniry iray dia tsy voatery ho lehibe hijinja tahiry. Maro amin'ireo fanovana ireo no hiasa amin'ny dian-tongotra sy ny fitaovanao.
Motera elektrika marobe ampiasaina no tsy mahomby na tsy refesina araka ny tokony ho izy amin'ny fampiharana. Ireo olana roa ireo dia miteraka fiasa mahery vaika kokoa noho ny tokony hampiasain'izy ireo, mampiasa angovo bebe kokoa mandritra izany. Toy izany koa, ny motera efa antitra dia mety naverina niverina imbetsaka nandritra ny fikojakojana, mampihena ny fahombiazany.
Raha ny marina dia tombanana ho maty moto iray na roa isan-jato ny motera isaky ny miverina izy io. Satria ny fanjifana angovo dia mitentina 96 isan-jaton'ny vidin'ny aotomobilan'ny motera iray, ny fandoavam-bola fanampiny ho an'ny môtô fahombiazana premium dia hiteraka famerenam-bola amin'ny androm-piainany.
Fa raha mandeha ny motera ary efa am-polony taona maro no niasa, mendrika ny manahirana ny fanavaozana azy ve? Miaraka amin'ny mpamatsy maotera mety, tsy manelingelina ny fizotran'ny fanavaozana. Ny fandaharam-potoana efa voafaritra mialoha dia manome antoka fa ny fifanakalozana maotera dia tanterahina haingana ary miaraka amin'ny fihenam-bidy kely. Ny fisafidianana dian-tongotra mahazatra an'ny indostria dia manampy amin'ny fanamorana ny fizotrany, satria tsy mila fanovana ny firafitry ny orinasa.
Mazava ho azy fa raha manana motera an-jatony ao amin'ny tranonao ianao dia tsy azo atao ny manolo azy ireo indray mandeha. Ataovy lasibatra ireo motera izay efa nampiverina voalohany ary manomana fandaharam-potoana fanoloana mandritra ny roa ka hatramin'ny telo taona mba hisorohana ny fihemorana lehibe.
Sensors fampisehoana motera
Mba hitazomana ny motera mandeha tsara, ny mpitantana ny zavamaniry dia afaka mametraka sensor retrofit. Miaraka amin'ny fandrefesana manan-danja toy ny hovitrovitra sy ny mari-pana manara-maso amin'ny fotoana tena izy, ny fanadihadiana an-tsary ny fikojakojana mialoha dia hamantatra ireo olana amin'ny ho avy alohan'ny tsy fahombiazana. Miaraka amin'ny fampiharana miorina amin'ny sensor dia mivoaka ny angona moto ary alefa amin'ny smartphone na tablette. Any Brezila, orinasa mpamokatra entana iray no nampihatra an'io teknolojia io tamin'ny motera mandeha amina milina famerenana rivotra efatra mitovy. Rehefa nahazo fampandrenesana ny ekipa mpikojakoja fa misy ny haavon'ny hovitrovitra ambony noho ny tokonam-baravarana azo ekena, ny fiambenan'izy ireo dia namela azy ireo hamaha ny olana.
Raha tsy nisy io fahitana io dia nety ho nipoitra ny fanidiana ny orinasa tsy nampoizina. Fa aiza ny fitehirizana angovo amin'ilay sary voalaza etsy ambony? Voalohany, ny fampitomboana ny hovitrovitra dia ny fampiakarana ny angovo. Ny tongotra mafy mifototra amin'ny motera sy ny hamafin'ny mekanika dia tena ilaina mba hiantohana ny tsy hovitrovitra. Amin'ny famahana haingana ny fampisehoana tsy mahomby indrindra dia voatazona farafahakeliny io angovo lany io.
Faharoa, amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fanidiana orinasa iray manontolo dia tsy ilaina ny angovo avo lenta hamerenana amin'ny laoniny ny milina rehetra.
Mametraha fanombohana malefaka
Ho an'ny milina sy motera tsy mandeha mitohy, ny mpitantana ny zavamaniry dia tokony hametraka starters malefaka. Ireo fitaovana ireo dia mampihena vetivety ny enta-mavesatra sy ny herinaratra ao anaty fiaran-dalamby ary ny fiakaran'ny herin'ny herinaratra mandritra ny fanombohana.
Hevero ho toy ny jiro mena io. Na dia azonao atsofoka amin'ny tongotrao aza ny tongotrao rehefa mihodina maitso ny jiro, dia fantatrao fa fomba tsy mahomby sy manahirana amin'ny mekanika io ary mampidi-doza.
Toy izany koa, ho an'ny fitaovana milina, ny fiandohana miadana dia tsy mampiasa angovo firy ary miteraka fihenjanana eo amin'ny maotera sy ny zoro. Mandritra ny androm-piainan'ny môtô, ny starter malefaka dia manome tahiry fandaniana noho ny fihenan'ny vidin'ny angovo. Ny fanombohana malefaka sasany koa dia nanamboatra fanamafisana angovo mandeha ho azy. Mety amin'ny fampiharana compressor, ny starter malefaka dia mitsara ny fepetra takiana ary manitsy araka izany mba hitazomana ny fandaniana angovo farafaharatsiny.
Mampiasà fiara hafainganam-pandeha miovaova (VSD)
Indraindray antsoina hoe fiara miovaova matetika (VFD) na mpamily inverter, ny VSD dia manitsy ny hafainganan'ny motera elektrika, mifototra amin'ny fangatahana fampiharana. Raha tsy misy izany fifehezana izany dia vaky fotsiny ny rafitra rehefa tsy ilaina ny hery kely kokoa, mandroaka ny angovo very tahaka ny hafanana. Amin'ny fampiharana mpankafy, ohatra, ny VSD dia mampihena ny onjam-peo arakaraka ny fepetra takiana, fa tsy manapaka ny onja fotsiny nefa mijanona amin'ny fahafaha-manana faran'izay betsaka.
Atambaro ny VSD miaraka amin'ny motera tena mahomby indrindra ary hiteny ho azy ny vidin'ny angovo mihena. Amin'ny fangatahana tilikambo mangatsiaka, ohatra, amin'ny fampiasana môtô super premium W22 IE4 miaraka amin'ny CFW701 HVAC VSDwhen rehefa milanja araka ny tokony ho izy, dia manome fihenan'ny vidin'ny angovo hatramin'ny 80% sy tahiry rano 22%.
Na dia milaza aza ny fitsipika ankehitriny fa tsy maintsy ampiasaina amin'ny VSD ny motera IE2, dia sarotra ny nampiharina nanerana ny indostria. Izany dia manazava ny antony mahatonga ny lalàna ho lasa henjana kokoa. Hatramin'ny 1 Jolay 2021 dia misy motera dingana telo mila manaraka ny fenitry ny IE3, na inona na inona fanampiana VSD.
Ny fanovana 2021 dia mitazona VSD amin'ny fenitra avo kokoa ihany koa, manome io laharana IE io ho an'ny vokatra. Antenaina hihaona amin'ny fenitra IE2 izy ireo, na dia tsy maneho ny fahombiazan'ny motera IE2 aza ny fiara IE2 - dia rafitra fanamarihana misaraka ireo.
Ampiasao feno ny VSDs
Ny fametrahana VSD dia zavatra iray, ny fampiasana azy amin'ny tena mety dia zavatra iray hafa. VSD maro no feno fonosana mahasoa izay tsy fantatry ny mpitantana ny zavamaniry. Ny fampiharana paompy dia ohatra tsara. Ny fikolokoloana rano dia mety hisavoritaka, eo anelanelan'ny famoahana sy ny haavon'ny tsiranoka ambany, be dia be no mety tsy mandeha. Ny fanaraha-maso namboarina dia ahafahana mampiasa motera mahomby kokoa mifototra amin'ny fitakiana famokarana sy ny fisian'ny tsiranoka.
Ny famaritana paompy tapaka ao amin'ny VSD dia afaka mamantatra ny faritra misy ny famoahana rano ary manitsy ny fahombiazan'ny motera mifanaraka amin'izany. Fanampin'izany, ny fikarohana ny paompy maina dia midika fa raha lany ny tsiranoka, dia maty tampoka ny motera ary misy fampandrenesana paompy maina. Amin'ireo tranga roa ireo dia mampihena ny fanjifana angovo ny motera rehefa kely ny angovo ilaina amin'ny fikirakirana ny enti-manana.
Raha mampiasa motera marobe amin'ny fampiharana paompy ianao, ny fanaraha-maso paompy jockey dia afaka manatsara ihany koa ny fampiasana maotera samihafa. Angamba ny motera dia mitaky môtô kely fotsiny hampiasaina, na fitambarana motera kely sy lehibe. Pump Genius dia manome fihenam-bidy bebe kokoa hampiasana ny motera mavesatra indrindra ho an'ny tahan'ny fivezivezena.
VSDs aza dia afaka manadio mandeha ho azy ny mpametaka motera, mba hiantohana ny fanesorana tsy tapaka. Izany dia mitazona ny motera amin'ny toe-javatra mety indrindra izay misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny angovo.
Raha tsy faly mandoa 30 heny amin'ny vidin'ny motera ianao mandritra ny folo taona, dia fotoana izao hanaovana ny sasany amin'ireo fanovana ireo. Tsy hitranga tampoka izy ireo, fa ny drafitra stratejika mikendry ireo teboka fanaintainanao tsy mahomby indrindra dia hiteraka tombony lehibe amin'ny angovo.